Rio Ferdinand oo kaga digay Manchester United saxiixa Philippe Coutinho xagaagan … (Sidee wax u jiraan?) – Gool FM
(Manchester) 28 Mar 2020. Kooxaha ka ciyaara horyaalka Premier League ayaa u dheg taagaya xaaladda Philippe Coutinho, maadaama uusan hubanti ahayn mustaqbalkiisa kooxda Barcelona oo muujisay rabitaankeeda ku aaddan inay fasaxdo.
Kubbad sameeyaha reer Brazil ayaa ku guuldarreystay inuu qaab ciyaareed wacan la yimaado kooxda Camp Nou ka dhisan kaddib markii 142 Milyan oo gini kaga tagay naadiga Liverpool laba sano ka hor.
Marka uu soo dhammeysto waqtiga amaahda ah ee uu ku qaadanayo Bayern Munich xagaagan, waxaa la la xiriirinayaa inuu ku laaban doono horyaalka Ingiriiska, waxaana kooxaha la la xiriirinayo ka mid ah Arsenal, Chelsea, Tottenham iyo Manchester United.
Balse difaacii hore Man United ee Rio Ferdinand ayaa qaba in kooxdiisii hore aysan la soo saxiixan Coutinho, inkastoo uu qiray in laacibkan tayo wanaagsan uu leeyahay.
Ferdinand ayaa aaminsan in laacibkan qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa uu dib u heli karo haddii uu ku soo laabto Premier League, balse uusan ku soo iftiimi karin kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford.
“Markii uu ku sugnaa Liverpool waxa uu ahaa ciyaaryahan cajiib ah, balse markii uu ka tagay, wali wax fiican ma sameynin,” ayuu Ferdinand ku yiri mar taageerayaashiisa Instagram-ka uu boggiisa kula wadaagayay barnaamij su’aalo iyo jawaabo ah.
“Wuu ku dhibtooday Barcelona, wuu la qabsan waayay, kaddibna Bayern way ku adag tahay inuu bandhig wanaagsan sameeyo, waxay ila tahay ciyaaryahan weyn, tayo wanaagsan leh, wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo.” ayuu difaacii hore ee Red Devils hadalkiisa ku daray.
Ferdinand ayaa carrabka ku dhuftay in Coutinho haddii uu helo koox ku habboon uu dib u soo celin karo bandhiggii loogaga bartay, waxaana uu sheegay inuu qabay in Man United uu u baahan yahay ka hor Bruno Fernandes, balse hadda aysan ku habbooneyn.
Intaas kaddib, Ferdinand ayaa la weydiiyay kooxaha uu ku soo celin karo tayadiisii, waxaana uu tilmaamay inTottenham uu boqolkiiba boqol ku soo bixi doono, Arsenal-na uu ku heli karo dib u soo kabasho, balse uusan jirin boos uu kaga ciyaari karo hab ciyaareedkooda, maadaama ay heystaan Mesut Ozil.
“Kooxo dhif ah ayuu ku habboonaan karaa, kuma soo bixi karo City, Liverpool iyo koox kale oo sidaas ah, Man United kuma habboonna, inkastoo uu horraan ugu ciyaaray Liverpool, sidaas darteed waa ay adkaaneysaa, xifaaltankana waa mid daran.” ayuu hadalkiisa ku soo af-meeray difaacii hore ee Manchester United, Rio Ferdinand oo ka hadlayay xaaladda Philippe Coutinho.